YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, March 19
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/19/20130အကြံပြုခြင်း
ယခု ဖိုးလပြည့် ကိုဘယ်လို အရေးယူမှာလဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/19/20132အကြံပြုခြင်း
စစ်သားတွေ Facebook မသုံးရ
ပိုပြီး သေသေချာချာ ပြောနိုင်တာကတော့ နေပြည်တော်မှ တပ်မတော်အကြီးတန်း တပ်မတော်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပ်တန်း ဆိုက်ဘာစစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ အမိန့်ဖြင့် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ထိမ်းသိမ်းရန် နာမည်ကြီး အကောင့်များကို ဗဟိုကွန်ပြုတာစနစ်ဖြင့် အလိုအလျောက် လှမ်းဖျက်ပစ် ဘန်းပစ်တာဖြစ်ကြောင်း မှန်တယ်လို့ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ရုံးမှ အမည်မဖော်လိုသူ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ် ။
(((စရဖ တပ်တစ်တပ်က ဒုတပ်မှူးကိုရော
ရေတပ်က အရာရှိကြီးတဦးကိုရော မေးပြီးသွားပါပြီ ။
မိမိမယားကို ပစ်ပယ်ကာ ကွယ်ရာတွင် မယားငယ်ထားသော တပ်မတော်အရာရှိတို့၏ မဖွယ်မရာသောပုံများ အင်တာနက်ပေါ် ပျံ့နှံ့လာခြင်း တို့ကြောင့် ခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ် ။
ဒီအပေါ်က အချက်သုံးခုကို ထပ်မံချိုးဖောက်သူများကို သိသိသာသာ အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်မှ လာသော သတင်းများအရ
သုံးခွင့်ရှိတယ်လို့ တိုက်ရိုက် အမိန့်ပေးတာမရှိပါဘူး .. ))
၄င်း တပ်မတော်သား ပြောထားတဲ့ အတိုင်း ပြန်ရေးသားပြီး တင်လိုက်ပါတယ် ... ။
ဖေ့စ်ဘုတ်ကို မှန်ကန်ရိုးသားစွာ သုံးစွဲတဲ့ တပ်မတော်သား အချို့ ကတော့ တစ်ချို့အချက် အလက်တွေကို မဖောက်ဖျက်ရင် ဘယ်စစ်သားမဆို social network ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ ခုခံဖြေရှင်းကြကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။
စစ်သည်တော်များ အင်တာနက် သုံးခွင့်မရှိတော့သော်လည်း အောင်ပန်းအလီလီဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ ။
တပ်မတော်သားများအား အစဉ်လေးစားလျက် ။
Credits - ကကြီး ခခွေး FOR preschool
Forward email တစ်ခုမှ ပြန်လည်ကူးယူ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ............................................
myanmar express ရဲ့ တာဝန်ခံ၊ Oppositeeye ဆိုတာ အခု ၇န်ကုန်ကိုေ၇ာက်နေတယ်။ သူက DSA အပတ်စဉ် ၃၀ က ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးသန့်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်တွေကတော့ ဂွက်ထော်လို့ခေါ်ပြီး မင်းခန့်ဆိုတဲ့ နာမည်အပါအ၀င် နာမည်အချို့နဲ့ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ စစ်သားတွေ FB မသုံးရဘူးဆိုပေမယ့် သူတို့လို စရဖတွေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသမားတွေတော့ မပါဘူး။ အဲဒီ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးသန့်ဆိုတဲ့ သူက စရဖချုပ်နဲ့ နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ တပ်ချုပ်ကြီးနဲ့ပါတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို အပတ်စဉ်တူသူငယ်ချင်းတွေကို ကြွားလေ့ရှိပါတယ်။ Myanmar Express ကို US domain name ယူထားပြီး လုပ်တာကတော့ ဒီမှာပဲလုပ်တာပါ။ Myanmar Express ကိုတပ်ချုပ်ကြီးကတိုက်ရိုက် ခိုင်းတာဖြစ်လို့ သူ့ကိုဘယ်သူမှထိလို့မရဘူးလို့လည်း အပတ်စဉ်တူသူငယ်ချင်းတွေကို ကြွားသေးတယ်တဲ့။ အခုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က NDC သင်တန်းတက်ပြီး စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ ရန်ကုန်ရောက်နေတာ။ နိုင်ငံခြားသွားဦးမှာတဲ့။ သူ့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေကရန်ကုန်မှာပါ။ မကြာခင်မှာသူ့မိသားစုပုံတွေ FB ပေါ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။- (Kyaw Phyu)
နိုင်ငံတော်မှာ … အကြွေး ၂၆.၈၄ ဘီလျံဒေါ်လာ ကျော် ရှိနေချိန်မှာ ဦးပိုင်မှာ… ဒေါ်လာ သန်းရာချီ ၀င်တဲ့..၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ ..
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်ဖို့ လေ့လာရေးကော်မတီဖွဲ့မည်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနဲ့ မကိုက်ညီတော့တဲ့ ဥပဒေအချက်တွေ ကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ပြန်လည်လေ့လာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဒီကနေ့ အတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ပညာရှင်များပါဝင်တဲ့ ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် စစ်ကိ...ုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ် သူရဦးအေးမြင့်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းခဲ့ရာမှာ ကန့်ကွက်သူမရှိပဲ အတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။
"နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရှိန်အဟုန်မြင့်မားမှုကြောင့် ခေတ်ကာလအခြေနေ အချိန်အခါနဲ့ အန်ဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တော့တဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်တော့တဲ့ ဥပဒေအချက်အလက်များ ရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအချက်တွေကို အခြေနေအချိန်အခါနဲ့ အန်ဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်၊ လေ့လာသုံးသပ်ရာမှာတော့ တစ်ဦးချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်း လိုရာဆွဲပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်အတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ အသိပညာပြည့်ဝသူများ၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူများနဲ့ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ ဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်"
ဒီအဆိုကို ကန့်ကွက်မယ့်သူမရှိတဲ့အတွက် အတည်ပြုကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား၏ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုအသစ် (မတ်လ ၁၈ ရက်) က လွှင့်တင်
lanet Myanmar Network
အမေရိကန်အား တိုက်ခိုက်သည့်ပုံရိပ်များ ပါဝင်သော ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုအသစ်ကို မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ထပ်မံ လွှင့်တင်လိုက်သည်။
တနင်္လာနေ့ (မတ်လ ၁၈ ရက်) က လွှင့်တင်လိုက်သည့် အဆိုပါ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုအသစ်တွင် မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်၏ လှုပ်ရှားမှု၊ စစ်ရေးပြအခမ်းအနား၊ အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့် မြို့တော် ဝါရှင်တန်ဒီစီ တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ပုံရိပ်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားသည် ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းကလည်း အမေရိကန်မြို့ကြီးများ တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ပုံရိပ်များပါဝင်သည့် ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုကို အင်တာနက်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းက လွှင့်တင်ခဲ့သည့် မြောက်ကိုရီးယား၏ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယို -
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အမေရိကန်အား ခြိမ်းခြောက်ထားသည့် ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုကို အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ထိုဗီဒီယိုတွင် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် အမေရိကန်မြို့ကြီးများ မီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေပုံများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် မြောက်ကိုရီးယားသည် တတိယမြောက် နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပြီး နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုထက် ပိုမိုသော ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယား၏ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုထွက်ပေါ်လာမှုနှင့် နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေသည့် သတင်းအား CNN က ထုတ်လွှင့်သည်။
အသိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေများအတွက် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်နိုင်ပြီ
ယနေ့(၁၉၊၃၊၂၀၁၃)နေ့။ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သောလယ်မြေများကို အောင်ဇေယျအိမ်ယာစီမံကိန်းအဖြစ် အကောင်ထည်ဖော်နေသော လုပ်ငန်းရှင်မိသားစုထံမှ နစ်နာကြေးရရှိရန်အတွက် အောင်ဇေယျအိမ်ယာစီမံကိန်းရုံးခန်းတွင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲသို့ လုပ်ငန်းရှင်မိသားစုများ၊ လယ်မြေအသိမ်းဆည်းခံ တောင်သူလယ်သမားများ၊ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ စတင်ညှိနှိုင်းရာတွင် နေ့လည်(၂း၀၀)နာရီကျော်တွင် သဘောတူညှိနှိုင်းမှုရရှိပြီး စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သဘောတူညှိနှိုင်းမှုအရ အောင်ဇေယျအိမ်ယာစီမံကိန်းအဖြစ် အကောင်ထည်ဖော်နေသော လုပ်ငန်းရှင်မိသားစုမှ ကာလတစ်ခုအတွင်း တစ်ဧကလျှင် ကျပ်သိန်း(၄၀)နှုန်းဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများကို နစ်နာကြေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
့ ခွတ်ဒေါင်းအလံကို ကိုင်မယ့်လက်ဟာ လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားပါဘူး (မင်းကိုနိုင်)
April Maung Maung's photo.
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် သူရဦးရွှေမန်းကို လွှဲပြီ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား လက်ရှိပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ သူရဦးရွှေမန်းက အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပါတီဗဟို အတွင်းရေးမှူးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။ “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ရော ပါတီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ စည်းမျဉ်းနဲ့အညီပဲ သမ္မတကြီးက ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ရယူခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုတော့ကြောင်း အတိအလင်း ပြောကြားနိုင်ပါတယ်” ဟု ယင်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးက “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေစည်းမျဉ်းမှာတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တာဝန်တွေယူရင် ပါတီတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်လို့မရလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မတကြီးက ပါတီတာဝန် ထမ်းဆောင်လို့ မရပါဘူး။ နှုတ်ထွက်မယ်။ မထွက်ဘူးဆိုတာ သူ့ရဲ့ဆန္ဒ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တာဝန်ယူရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာတော့ ပါတီတာဝန် ထမ်းဆောင်မရလို့ပဲ ပါပါတယ်။ ထွက်ပါလို့တော့ မပါဘူး” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဦးရဲထွန်းက “ပါတီခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ဆိုရင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုရလာမှာပါ။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပါတီတွင်းမှာပဲ တရားဝင် စည်းရုံးလို့ ရလာမယ်။ သူ့ရဲ့ သြဇာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုရှိလာမှာပေါ့” ဟု ယင်းက သူ၏အမြင်ကို ရှင်းပြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ (၆၄) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဒုတိယသမ္မတများသည် ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခံရသည့်နေ့မှစ၍ မိမိတို့ရာထူး သက်တမ်းအတွင်း ယင်းပါတီ အဖွဲ့အစည်း၏ ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရဟု ပါရှိကြောင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးအားဆန္ဒပြရန် လျှောက်ထားချက်အား ငြင်းပယ်
“စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးအား ထုတ်ပယ်အရေးယူပေးရေး နေပြည်တော်တွင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ရန် လျှောက်ထားချက်အား ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ ငြင်းပယ်”
လက်ပံတောင်းတောင်နှင့် မဟာဗျူဟာ အပျော့/အမာ..
by ငရဲ သား (Notes) on Tuesday, March 19, 2013 at 4:12am
ဟိုတနေ့က လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး note တစ်ခု တင်ထားပါတယ်..။ နောက်ပိုင်းမှာ အစီရင်ခံစာကို သုံးသပ်သူတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စ၊ မီးခိုးဗုံးကိစ္စမှာ အစီရင်ခံဖော်ပြချက် အားနည်းတာကို ထောက်ပြကြပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် တချို့က ဒီစီမံကိန်းကြီးကို ရပ်ဆိုင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းမှုနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုမယ့် အခြားကုမဏီတွေနဲ့ လုပ်လို့မရဘူးလားလို့ ဝေဖန်လာကြပါတယ်..။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးသြဇာရှိသူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအ၀င် ဒီအချက်ကို ထောက်ပြကြပါတယ်။
အဲဒီဝေဖန်ချက်တွေကို ပြန်လည်လေ့လာမိတဲ့အတွက် ဒီ ပို့စ်ကို ရေးပါတယ်...။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီစီမံကိန်းကို ၀မ်ပေါင် အနေနဲ့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရင် ....
အစိုးရအနေနဲ့ ဘာတွေမှာ ကျွံထားသလဲ...။
အခုလို လက်လှုပ်မရ ... ခြေလှုပ်မရ အခြေအနေကို ဘယ်လို တဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်ပေးနေသလဲ....
ဆိုတာတွေကို .... မဟာဗျူဟာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြန်လေ့လာမိပါတယ်..။
တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးနှင့် မဟာဗျူဟာ..။
အဲဒီနေရာမှာ ရှင်းပြလိုတာက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကုမဏီတွေဟာ စင်းလုံးချော ပုဂလိက တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အားလုံး သိထားဖို့လိုပါတယ်..။ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပေါလစ်ဗျူရိုရဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ ရပ်တည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ များပါတယ်..။ ယနေ့အထိလည်း ဘယ် နာမည်ကြီးကုမဏီမှ တရုတ်အစိုးရနဲ့ မကင်းပါဘူး..။ နည်းအားဖြင့် မဟာဗျူဟာနဲ့ ပေါ်လစီကို ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ တဖက်တလမ်း ပါဝင်နေသူတွေပါ..။
အခု လက်ပံတောင်းကြေးနီသတ္တုတွင်းကိစ္စမှာ ဦးပိုင်နဲ့ တိုက်ရိုက်တွဲလုပ်တဲ့ မြန်မာယန်စီ၊ မြန်မာယန်စီ နောက်က ၀မ်ပေါင်၊ ၀မ်ပေါင်နောက်က Norinco, ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းအဆင့် စစ်လက်နက်ကုမဏီပါ..။ အဲဒီ Norinco ဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို သစ္စာခံကုမဏီ ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပြီးသားပါ..။
ပြည်ပ သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ မြန်မာပြည်အပေါ် ထားရှိတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မူဝါဒတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက် (၇) ချက် ထားရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ -
၁။ တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ဘက်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ဆက်သွယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေး။
၂။ UWSA နဲ့ တရုတ်နယ်စပ် တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်များ အပါအ၀င် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရေး။
၃။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ လောင်စာစွမ်းအင် စိတ်ချဖူလုံစေရေး။
၄။ တရုတ် - မြန်မာအကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်သည့် တရုတ်လူမျိုးများ၏ လုံခြုံရေး။
၅။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနေနဲ့ အင်အားကြီးပြီး ခေါင်းထောင်ထလာမှာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး။
၆။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရေး။
၇။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အနောက်ဘက် တံခါးဝတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ် အင်ပါယာ မချဲ့ထွင်လာနိုင်ရေးအတွက် ကြားခံဇုန်အဖြစ် ထားရှိရေး။
အဲဒီအချက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပတ်သက်မှုနောက်ကွယ်က တရုတ်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်...။
၁ အချက်အရ အိန္ဒိယ ကူမင်း လမ်းကို မြန်မာပြည်ဖြတ်ပြီး ဖောက်လုပ်နေပါပြိ..။
၂ အချက်အရ UWSA ကို ကြားခံထားပြီး နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကို ကစားနိုင်ပါပြီ..။
၃ အချက်အရ လောင်စာစွမ်းအင်စိတ်ချ ဖူလုံစေရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားပြီး အမေရိကန် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့
မလက္ကာရေလက်ကြားကို လောင်စာပို့လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးမပြုတော့ပဲ
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင် ကျောက်ဖြူနဲ့ ကူမင်းကို တိုက်ရိုက် ပိုက်လိုင်းတွေ ဖောက်၊ ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းဖောက်ပြီး. ..။ သွားနေတဲ့ ကျောက်ဖြူကူမင်း ပိုက်လိုင်းများ..။
၄ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သယံဇာတ တူးဖော်ရေးများအပါအ၀င် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ
၅ အိန္ဒိယအနေနဲ့ အင်အားမကြီးလာရန် မြန်မာနိုင်ငံအား ကြားခံကာ ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေ ဖန်တီးထားခြင်း..။
(ဥပမာ ကျောက်ဖြူကူမင်း ကား/ရထားလမ်း သည် အိန္ဒိယအတွက် မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းဖြစ်လာမည်)
၆ ယခုထက်ထိ ဆက်ဆံနေပါသည်..။ တချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေ နှစ်ကူးမှာ တရုတ်သံရုံးတွင် အန်ပေါင်းတွေ တောင်းကြသည်..။
၇ ထိုအချက်ကတော့ ရှင်းပြစရာမလိုပြီ...။
ကျောက်ဖြူ-ကူမင်း (ရွှေ) သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေနံပိုက်လိုင်း
၁၉၉၇ ခုနှစ်ကစပြီးအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု
အကူအညီတွေ ရရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေမှာ အကြီးဆုံးရေသောက်မြစ် ဖြစ်လာပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို တခြားနိုင်ငံတွေထောက်ပံ့သလိုဘဲ ဗဟိုအစိုးရက ထောက်ပံ့တဲ့ပုံစံ၊ ဗဟိုဘဏ်မှတဆင့်
အတိုးမဲ့ချေးငွေပုံစံ၊ အထူးလျှော့ပေးတဲ့အတိုးနှုန်းချေးငွေပုံစံ၊ ကြွေးမြီလျှော့ပေါ့တဲ့ပုံစံ၊ ကုမ္ပဏီများကတဆင့်
ချေးငွေတွေနဲ့ ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုးကူညီထောက်ပံ့နေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုက
စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းဟန်ပြသော်လဲ နောက်ကွယ်တွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အကြံအစည် ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
တရုတ်နိုင်ငံကျင့်သုံးနေတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒကတော့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအပေါ်မှာဘဲ အခြေပြုထားကြောင်း
ရှင်းလင်းလှပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကသဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေ ရဖို့အတွက် မြန်မာစစ် အစိုးရကို နိုင်ငံရေး၊
စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ငွေကြေးအထောက်အကူတွေ အများကြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြူပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေလို မဟာဗျူဟာကျတဲ့
ကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မတ်လ အထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏဟာ စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄ဝ ဒဿမ ၆၉၉ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်..။ အဲဒီထဲမှာ တရုတ်က အများဆုံးပါ..။ ဒါဟာ တရားဝင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စာရင်းဇယားပါ..။ မြန်မာနိုင်ငံသား အမည်ခံပြီး ပြည်တွင်းကုမဏီအနေနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ..။
လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ကျွံဝင်ခြင်း
တရုတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၊ infrastructure ပေါင်းစုံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါတယ်..။ ရွှေတွင်းက စပြီး ရေထဲက ငါး အထိ ပါဝင်ပါတယ်..။
ရေအားလျှပ်စစ် စပြီး အင်ကျင်းကျောက် အထိ တရုတ်ပြည်ကို ပို့ပါတယ်..။ သာမန် အစိုးရနဲ့ မဟုတ်တဲ့ ဒေသန္တရ ဈေးကွက်တွေကို ကြည့်ရင်လည်း မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ကို တရုတ်က လုံးဝ လွှမ်းမိုးထားပါတယ်..။
မြစ်ဆုံကို ရပ်ဆိုင်းအပြီးမှာ နေပြည်တော် နှစ်လည် ကျောက်မျက် ပြပွဲဈေးကွက် ပျက်သွားတာကို သတိရကြမယ်ထင်ပါတယ်..။ အဲဒီအတွက် အစိုးရအပါအ၀င် ကျောက်မျက်ကုန်သည်တွေ ဒေါ်လာ သန်း ရာချီ နစ်နာသွားတာ သက်သေပါပဲ...။ ဒါ တစ်ကွက်ပဲ ပြသွားတာပါ..။
အရင်တုန်းက တရုတ်အစိုးရက ပေါ်လစီအရ ကုန်သည်တွေကို မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း တွေဝယ်ဖို့ တစ်နှစ်ကို ၄ ကျပ်တိုးနဲ့ ငွေချေးပါတယ်..။ အဲဒီငွေနဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေ ပြည်တွင်းလာပြီး ဈေးကစားကြပါတယ်၊ အရောင်အ၀ယ်လုပ်ကြပါတယ်..။ မြစ်ဆုံအပြီးမှာ ဒီငွေကို မချေးတော့ပါဘူး..။ နောက်ပြီး တရုတ်ပြည်ကို မြန်မာပြည်က သွင်းတဲ့ ရတနာတွေကို အခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခဲ့ပါတယ်..။ အဲဒီတော့ တရုတ်ကုန်သည်က လာမ၀ယ်နိုင်ပါဘူး..။ လာမ၀ယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ကျောက်စိမ်းတွေ ငုတ်တုတ်မေ့ကုန်ပါတယ်..။
ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ဈေးကွက် ယနေ့အထိ နာလံမထူတော့ပါဘူး..။
ဒါ ... ဥပမာ တစ်ခုပါ...။
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ..။ တရုတ်ပြည်က ဘဏ်တွေမှာ တစ်နှစ်ကို အတိုးအနည်းငယ်နဲ့ ချေးလာသူ ငွေလုံးငွေရင်းသမားတွေက မန္တလေး၊ ရန်ကုန်အထိ လာပြီး အိမ်ခြံမြေ ဈေးကစားကြတယ်..။ ငွေတိုးချေးစားကြတယ်..။ ၄င်းတို့နဲ့ မကင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အများကြီးပါပဲ..။ အဲဒီတော့က တရုတ်ဘက်က သူတို့ကို မချေးတော့ရင် ဒီဘက်မှာ ငွေကြေးပြဿနာတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်..။
ဒါလည်း ဥပမာ တစ်ခုပါပဲ..။
အဲဒီအချက်တွေဟာ စတော့ရှယ်ယာတွေ၊ အများပိုင် ကုမဏီတွေ ပေါ်ပေါက်များပြားလာတဲ့ခေတ်ကျရင် မြန်မာ့စီးပွားရေးကို ဇောက်ထိုးဆင်းသွားအောင် ကိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့ key တွေပါပဲ...။
အစိုးရနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကြားပွဲစားတွေက တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနတွေကို ၀င်တာတွေရှိပါတယ်..။ အစိုးရချင်း တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာတွေရှိပါတယ်..။ အပေးအယူတွေလည်းရှိပါတယ်...။
အရင်တုန်းက ဗီတိုအာဏာသုံးပေးတဲ့အတွက် စီမံကိန်းတွေ ပေးလိုက်ရတာတွေ ရှိသလို အကြွေးလိုချင်လို့ ပေးလိုက်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်..။ ယခင် စစ်အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအားနည်းခြင်းပါပဲ..။
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ မှာလည်း ခင်ဗျားတို့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ..။ နည်းပညာပိုင်းကို အကုန်လုံး တရုတ်ကုမဏီတွေပဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီး ဖုန်းတစ်လုံးကို ဆယ့်ငါးသိန်းကနေ ယနေ့ခေတ် နှစ်သိန်းကျော်အထိ ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပေါင်းပြီး ဈေးတင်ရောင်းချနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း အများကြီးပါပဲ..။
ခုထက်ထိလည်း သူတို့ကို ကျော်ပြီး မလုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး..။ လက်ရှိအချိနမှာလည်း တရုတ်ကုမဏီကဦးဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပင်လယ်ရေအောက် ဆက်ကြောင်းအသစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေတုန်းပါ..။
လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ.. ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံတွေကို နှစ်ရှည်စီမံကိန်း (နှစ် ခြောက်ဆယ်စာချုပ်) နဲ့ တရုတ်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်စေပြီး တရုတ်ဘက်ခြမ်းကို မီးပေးနေခဲ့တာပါ...။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးတောင် မြန်မာ့မြေပေါ်က ဓါတ်အားပေးစက်ရုံက တရုတ်ကိုပို့တဲ့ လျှပ်စစ်မီးကို တစ်ယူနစ်ကို ၂၅ ကျပ်နဲ့ တရုတ်ဆီက မိမိ နိုင်ငံအတွက် ပြန်ဝယ်ယူပြီး လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဖြူးခဲ့ရတယ်လို့ .. လွှတ်တော်မှာ ၀န်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်...။
အဲဒီလို ဖြစ်စဉ်တွေဟာ .... အနောက်အုပ်စုက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကြောင့်ထက် ကိုယ့်သယံဇာတ ကိုယ် မစီမံနိုင်လို့ ဘ၀ပျက်တဲ့ ...... ကုဋေရှစ်ဆယ် သူဌေးသား ပုံပြင်နဲ့ ပိုတူပါတယ်...။
အခု Digital မီတာတွေ တပ်ပါတော့မယ်...။ မီတာတွက်ချက်မှုတွေ မြန်လာပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီမီတာကို .. တရုတ်ကုမဏီက သွင်းတာပါပဲ..။
သယံဇာတပေါင်းစုံတူးဖော်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ .. ... သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အားလုံးမှာလည်း မြန်မာအစိုးရဟာ .. ကျွံခဲ့ပါပြီ....။ ကျွံခဲ့တာမှ အဲဒီကဏ္ဍတွေမှာ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အခြားနိုင်ငံက နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ လာရောက်ဖို့ နေရာ မရှိတဲ့အထိ နှစ်ရှည်စာချုပ်များနဲ့ ကျွံခဲ့ခြင်းပါ..။ နှစ်သုံးဆယ်၊ နှစ်ခြောက်ဆယ်... ပေါ့..။
တရုတ် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ပေါ်လစီအရ ကျောက်ဖြူနဲ့ ကူမင်းကြားမှာ မြန်မာ့မြေပုံကို ကန့်လန့်ဖြတ်ပေးလိုက်ရတယ်...။ မြစ်ဆုံအစား ချီဗွေငယ်နဲ့ အခြားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကို ရပိုင်ခွင့်ရာနှုန်းအနည်းငယ်နဲ့ တည်ဆောက်ပေးလိုက်ရတယ်..။ အခြား နီကယ်၊ ကြေးနီ၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက် သစ် အပါအ၀င် သယံဇာတ တူးဖော်ရေး စီမံကိန်းတိုင်းက နှစ်ရှည်တွေချည်းပဲ..။
အခု မြစ်ဆုံကို ရပ်ဆိုင်းတယ်ထား ..ဒေါ်လာ အနည်းဆုံး သန်းနှစ်ထောင် လျော် ရမယ်..။ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ တင်မယ်..။ အဲဒီလို စီမံကိန်းတွေ အများကြီး..။ မြစ်ဆုံရပ်ဆိုင်းချိန်မှာ တရုတ် အစိုးရက တိုက်ရိုက် အသံထွက်ခဲ့တာကို ကြည့်ရင် ဒီစီမံကိန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမဏီတွေဟာ အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှ ရှိသလား မရှိသလား...။ သက်သေပါပဲ..။
ယခင် အစိုးရလက်ထက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အချိန်က အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ကုမဏီတွေရဲ့ စီမံကိန်းတိုင်းဟာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်တာတွေချည်းပါပဲ..။ ပြဿနာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ..။
၄င်းတို့ကို စာချုပ်ဖျက်စေဖို့အတွက် ၄င်းတို့ဖက်က အားနည်းချက်ကို ရှာဘောင်ထဲကမှ ရပါလိမ့်မယ်...။ အဲဒီမှာ ပြဿနာတစ်ခု ရှိတာက တချို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက (မြစ်ဆုံလို) ပွဲစားတွေနဲ့ လုပ်ထားတာပါ..။ အဲဒီတော့ ပွဲစားမျက်နှာ ကြည့်ရပြန်ရော...။ အဲဒီလို အထုပ်အရှုပ်တွေ အများကြီး..။ မြစ်ဆုံကို ရပ်လိုက်ရလို့ ပွဲစား Asia World ထွန်းမြင့်နိုင်ကို ဘာအခွင့်အရေးတွေ ပေးလိုက်ရသလဲဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေပဲ သိမှာပါ..။
မုံရွာ ကြေးနီစီမံကိန်းများအပါအ၀င် စီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ၀မ်ကျားပေါင်နှင့် ဦးသိန်းစိန်ရှေ့တွင် လက်မှတ်ထိုးနေစဥင်္ အဲဒီလိုမျိုးပါပဲ..။ လက်ပံတောင်းတောင်ဟာလည်း ၀မ်ကျားပေါင်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ပေါင်း ၁၅ ခုထဲက တစ်ခုပါပဲ..။ ယခင် အိုင်ဗင်ဟိုဆီက ဦးပိုင်နာမည်သုံးပြီး ၀မ်ပေါင်က ငွေသွင်းတယ်ပြောပေမယ့် တကယ် အဲဒီစီမံကိန်းတွေကို စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာက ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ၀မ်ကျားပေါင်ရှေ့မှာ ချုပ်ခဲ့တာပါ..။ အဲဒီ ငွေကြေး အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်သွားတဲ့ အချက်ကို တွေ့လို့ လွှတ်တော်မှာ ထ ပြောတဲ့ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဦးလွန်းမောင်တောင်မှ ပြုတ်သွားခဲ့တာ .. အားလုံးအသိပါပဲ..။
ဒီတော့ ဒီတစ်ခုကို ၀မ်ပေါင်နဲ့ ဦးပိုင်/ ၀မ်ပေါင်နဲ့ အစိုးရ တိုက်ရိုက်ချုပ်တယ်ဆိုရင် ဖျက်ပစ်ရတာ လွယ်လွယ်လေးပဲ...။ အခုဟာက ကျန်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်..။ ယူထားတာတွေ၊ မျိုထားတာတွေ၊ မထွေးနိုင် မအန်နိုင် ဖြစ်နေတာတွေအများကြီး..။ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ..။ အဲဒီအတွက် တပ်မတော်ကဘာရခဲ့သလဲ..။ အဲဒီတုန်းက တာဝန်ရှိသူတွေ ဦးတင်အေးတို့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦးတို့ အသိဆုံးပါ..။ ဒါတွေအားလုံးကို ပြည်သူကို ချပြဖို့ မလွယ်ပါဘူး..။ သိကြရင်လည်း ဒေါသထွက်တာကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး..။
ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်း လက်ရှိအခြေအနေမှာ မကယ်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ ရဲရဲကြီး ပြောချင်ပါတယ်....။
ဒီစီမံကိန်းအတွက် .. အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်ရာနှုန်းကို တပ်မတော်က ရတယ်ဆိုတာလည်း NLD ကတင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး အဆိုမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင် ပြန်လည်ရှင်းပြသွားတာကိုလည်း ကြားမိပါတယ်..။
သေချာတာက ၀မ်ပေါင် မိခင် ကုမဏီ ဖြစ်တဲ့ Norinco က ထုတ်လုပ်တဲ့ MBT 2000 တင့်ကားတွေနဲ့ ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲတွေမှာ အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ K8 အမောင်းသင်လေယာဉ်တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တွေဖြစ်ပြီး ၀မ်ကျားပေါင် လာပြီးမှ တပ်မတော်က ရလာခဲ့တာကို တော့ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး..။
မြန်မာ့လေတပ်မတော်သုံး တရုတ်လုပ် K-8 အမောင်းသင်လေယာဉ်
အဲဒီအတွက် ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ အခြေအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၀င်ပြီး ကစားတယ် လို့ ယူဆပါတယ်..။ အဲဒီတုန်းက စာချုပ်ချုပ်ထားသူတွေ ကျွံထားသူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိုင်ကန်တော့သင့်ပါတယ်..။ ၄င်းတို့ အထုပ်ရှုပ်တွေကို ရှင်းပေးလို့လေ..။
တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကုမဏီတွေအပေါ် သြဇာညောင်းမှုကြောင့် လက်ပံတောင်းတောင် အပါအ၀င် စီမံကိန်းတချို့ရပ်သွားရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး..။ စီးပွားရေးလုပ်ကြံမှုတွေ အများကြီးနဲ့ ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
၂၀၁၀ မှာ ၀မ်ကျားပေါင်လာတုန်းက ပြောသွားတယ်..။ တရုတ်နိ်ုင်ငံသား စီးပွားရေးသမားတွေကို .. လုံခြုံစေချင်တယ် ... တဲ့..။
မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းမှာ တရုတ်ကုန်သည်က ဗမာ ပွဲစားကို ၀ိုင်းထိုးတော့ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာလေး တစ်ခုရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ......မန္တလေးကျောက်ဝိုင်း .. အရောင်းအ၀ယ်ဘယ်လောက် အေးသွားသလဲ.....။
ဒါ .. ပါးပါးလေးပါ..။
အဲဒီတော့က ... တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေး စစ်ရေး မဟာဗျူဟာ ကစားကွက်ထဲမှာ ခွက်ခွက်လန်အောင် ကျရှုံးနေတဲ့ မြန်မာအစိုးရ လုပ်လို့မရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပါးပါးလေးနဲ့ ဖြေပေးနိုင်ဖို့ ကိစ္စမှာ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ အစိုးရနဲ့လည်း မဖြစ် ဦးပိုင်လည်း မတတ်နိုင်ပါ...။
ဘယ်သူနဲ့မှ ကြိုးစားလို့ရနိုင်မလဲ.. အားလုံး အသိပါ..။
ဒါကို .. အသုံးချ ခံရတယ်လို့ ..ပြောလို့မရပါ၊ အခိုင်းခံနေရတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖော်မရပါ..။ ကာဗာပေးတယ်လိုလည်း နာမည်တပ်လို့ မရပါ ..။ လယ်သမားတွေ မျက်နှာ မကြည့်ဘူး လို့လဲ ခေါ်ဆိုလို့မရပါ ..။ ဒီလိုဗျူဟာမျိုးကို ဖြည်ချင်ရင် ဘောင်ထဲက ဖြည်မှပဲ ရမယ်ဆိုတာ.. activists တွေ သတိထားမိဖို့ လိုပါတယ်...။
မျက်တောင်တဆုံး ကြည့်လို့ မရပါဘူး..။ မျက်စိတဆုံး ကြည့်မှ ရပါမယ်....။
ဒါဟာ... သန်းခြောက်ဆယ်သော ပြည်သူပြည်သားတွေ မနစ်နာဖို့ အတွက် လုပ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်...။
အခုဟာက ဦးပိုင်အပြင် ...၀မ်ပေါင်ကိုပါ ..... Rule အတွင်းကနေ တရစ်ပြီး တစ်ရစ် .. ကျပ်လိုက်တာပါပဲ..။
(၀မ်ပေါင် လုပ်ထားတဲ့ စီမံကိန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီး ကျန်ပါသေးသည်..။ ကျန်တာတွေလည်း လာပါဦးမည်)
မဟာဗျူဟာနဲ့ ရစ်ပတ် လာတဲ့သူကို မဟာဗျူဟာနဲ့ပဲ ဘောင်ထဲကနေ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ပါးပါးလေး ဖြည်ရမှာပါပဲ..။ ထိပ်တိုက်တွေ့လို့မရပါ....။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် .. ပြောဖူးပါသည်..။
“တရုတ်ဟာ မြန်မာနဲ့ ကပ်လျက်မှာရှိနေပြီး အမေရိ
ကန်ကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မေ့ပစ်
အဲဒီစကားရဲ့ အနက်ကို သုံးသပ်နိုင်ကြပါကြောင်း...။
နောက်ဆက်တွဲ တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါသည်. ...။
လက်ရှိတွင် ဂျပန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်နေသော သီလ၀ါ စက်မှုဇုံစီမံကိန်း မြေသိမ်းမှုများအား ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် လယ်သမားများ ဖက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်နေသူများကိုပါ ...။
လက်ပံတောင်းတောင်ဆန္ဒပြမှု၏ ရိုက်ခတ်မှုသည် ထိုဒေသရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုပါ ရိုက်ခတ်လာပါလိမ့်မည်...။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ပံတောင်းတောင်မှ ကူညီဆောင်ရွက်နေသူများ ပါဝင်လာနိုင်သောကြောင့်ပင်..။
ထို စီမံကိန်းများသည် လူဦးရေ ဘယ်လောက်ကို အလုပ်အကိုင်တိုးပွားစေပြီး ဒေသအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်သည်ကိုလည်း သတိထားစေချင်ပါသည်..။
နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ ဘီလီယံနှင်ချီ လျှော်ပေးခဲ့သော အားလုံးကို အကျိုးရှိစေမည့် ဂျပန်၏ အမှန်အကန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို မထိခိုက်စေချင်ပါ ..။
ထို့အတူ ... ထိုစီမံကိန်းကို စောင့်ကြည့်နေသော အခြား .. အခြားသော ကမ္ဘာ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ရှိနေသည်ကိုလည်း မမေ့စေလိုပါ..။
လက်ပံတောင်းတောင်နှင့် အနေအထားမတူသည်ကိုလည်း သတိရစေချင်ပါသည်...။
လျော်သူ. ..။ ပေးသူ....၊ ရရှိသူ ....ဆောင်ရွက်ပေးသူ......အားလုံး ရိုးသားကြဖို့ပါ...။
လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသည် .. ဒီမိုကရေစီတ်ာလှန်ရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ပစ္စည်းမဲ့တော်လှန်ရေး လုပ်ရလောက်သည့် အဆင့်အထိ မဆိုးသေးဟု ...မြင်ပါသည်..။
တေးရေး - ကိုခွန်ဆိုင်း
တေးဆို - ကိုမာကီ၊စိမ်းလဲ့လဲ့
တေးဂီတ - Ever Green Music Network
အသံဖမ်း - Dozen Wave
Mixing - Myo Kyaw(String Studio)
တည်းဖြတ် - N ထွန်းလွင်(Ever Green Music Network)
ရန်ကုန်ကနေ လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေလိုင်ဇာကို မနေ့က ရောက်ရှိ
မြောက်ကိုရီးယားမှ မြန်မာသို့ တင်ပို့ရန်ရှိသော အနြု...
မြောက်ကိုရီးယား၏ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုအသစ် (မတ်လ ၁၈ ရက်)...
အသိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေများအတွက် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်န...
့ ခွတ်ဒေါင်းအလံကို ကိုင်မယ့်လက်ဟာ လူမျိုးဘာသာ မခွဲ...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးအားဆန္ဒပြရန် လေ...
ရန်ကုန်ကနေ လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေလိုင်ဇာကို...